Izindawo Eziphezulu Eziyi-10 Zekhasino ZaseRussia - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Izindawo eziphezulu ze-10 Russian Casino
(786 amavoti, isilinganiso: 4.00 out of 5)
Iyalayisha ... Ukugembula kuye kwaba yinkinga enkulu kunazo zonke zenqubomgomo yeHulumeni yaseRussia kusukela ekuqaleni kwekhulu le-21 ngenxa yenani elikhulayo lemishini ye-slot kanye nezindlu zokugembula. Ama-casino aqala ukusabalalisa lonke leli zwe, okwakwenza ukuba iziphathimandla zendawo zikhathazeke kakhulu, ezazikhathazekile ngabantu abancane.
Ifulegi laseRussiaKwamanje, ukugembula eRussia kusemthethweni ezindaweni eziningana zesifunda. Eminyakeni embalwa eyedlule - ku-2009 - yamenyezelwa njengokungekho emthethweni ensimini yonke yensimu njengengxenye yenqubomgomo eqinile yokulwa nokugembula eRussia.
Iziphathimandla zezwe empeleni azizange zisekele imisebenzi yokugembula e-web, eyesizathu sokuthi ukufinyelela kwabadlali kumawebhusayithi ahlobene ne-poker kuvinjelwe ngokoqobo ngaphandle kwesizathu esicacile.
Uhlu lwezindawo ze-10 eziphezulu ze-Casino ezisha ze-Russian Online
Umlando Wokugembula Umthetho eRussia
Zonke izinhlobo zokugembula zavinjelwa ngokomthetho ku-1928 nangesikhathi lapho iRussia ibekwa ngaphansi kweSoviet Rule. Lokhu kwaphela kuze kube sekupheleni kwe-1980s, lapho imithetho ethile ithola ushintsho. Ku-1988, leli zwe lenze imishini ye-slot yomthetho kwezinye izindawo kuphela. Ukuvinjelwa kwezokugembula kwakususwe ngokugcwele ku-1989.
Esikhathini esiphakathi kwe-1989 ne-2002 kwakuyisikhathi sokwanda okukhudlwana kwenani lekhasino elisebenza ensimini yeRussia, izindlu zokugembula ezingaphezu kuka-50 ziqhutshwa eMoscow kuphela. Lolu hlobo lokuzijabulisa lwaba nolwazi olubanzi nakakhulu phakathi kwezakhamizi zendawo, kodwa umthetho wezwe wawungumuntu ompofu, okwenze uHulumeni wezwe athathe izinyathelo eziphuthumayo zokulawula lo msebenzi.
Lokhu kuqhubeka kuze kufike ku-2006, lapho umthetho ovimbela zonke izinhlobo zokugembula ku-inthanethi kuleli zwe udluliselwa uhulumeni waseRussia. Kuze kube yileso sikhathi, amakhasimende wendawo anikezwe ukufinyelela kumawebhusayithi amaningi wokugembula.
Ku-2009, ukugembula kwasemthethweni ezindaweni ezingu-4 zezwe: i-Kaliningrad Oblas, i-Altai Krai, i-Primorsky Krai ne-Krasnador Krai. Isimo se-quo saqhubeka kuze kube yiminyaka emithathu kamuva. Ku-2012, ukuvinjelwa kwezokugembula ku-intanethi kuleli zwe kwalethwa isinyathelo esisodwa ngokubonga kwesinqumo seNkantolo Ephakeme YaseRussia, okusho ukuthi amawebhusayithi abahlinzeki begemidlalo e-inthanethi kufanele avinjelwe kuleli zwe.
I-Roskomnadzor - uhlu oluthi wonke amawebhusayithi abizwa ngokungekho emthethweni nguhulumeni waseRussia - wenziwa umphakathi kamuva ku-2012. Lolu hlu lubandakanya ulwazi oluningiliziwe mayelana nezizinda eziningana eziphethwe opharetha bamazwe angaphandle. Lokhu kwaholela kwamanye amagama amakhulu kakhulu embonini ukuvala ukufinyelela kumawebhusayithi abo kumakhasimende aseRashiya, kodwa amanye ama-opharetha ahlinzeka ngezinsizakalo zabo ezweni.
Kube nokuvinjelwa okuphelele kokugembula emuva ku-USSR, ngemva kwalokho imingcele yokugembula yayithukululiwe, ikakhulukazi ezindaweni ezavakashelwa izivakashi njalo. Inani elikhulayo lamakhasino nezindlu zokubheja zenziwa zitholakale kuze kube yilapho ukuvinjelwa kwezokugembula kwaphakanyiswa nguHulumeni ngo-Agasti 1989 futhi indawo yokuqala yokudlala eMoscow yavulwa.
Kodwa-ke, ukulawulwa okungekho emthethweni, ukuqapha nokulawula imisebenzi yokugembula ensimini yezwe kwaba isizathu sokuthi ukugembula sekuqale kubangela izinkinga ezinkulu kuHulumeni. Lokhu kwaholela ekushintsheni okukhulu kwemithetho yokugembula yaseRussia ku-2009.
Imisebenzi yokugembula kumakhasino angokwenyama avunyelwe kuleli zwe iminyaka eyishumi manje.
Njengoba kushiwo ngenhla, ukugembula eRussia kusemthethweni ezindaweni eziningana ezikude ezingxenyeni ezikude zezwe. Lezi zifunda kukhona: i-Kaliningrad Oblast, i-Azov-City (ingxenye ye-Oblast yaseRostov yayingaphandle ohlwini), i-Altai Krai ne-Primorsky Krai.
I-Primorsky Krai ibhekwa njengokukhethwa ngokucophelela ukuze kusetshenziswe imakethe yase-Asia ephumelelayo. Lesi sifunda siseduze nomngcele waseChina, okuzohlinzeka ngembonini yendawo ithuba lokuheha ama-roller aphezulu ase-Asia esifundeni.
Kukhona nezinhlelo ze-casino enkulu eseduze neVladivostok ehlose ukuheha abadlali abaningi endaweni.
NgoDisemba 2014, kwacaca ukuthi uMongameli uVladimir Putin wanikeza ukukhanya okuluhlaza okwandisa inani lezifunda zezifunda, okwakubangelwa ukufaka iCrimea neSochi ohlwini.
Ukugembula ku-intanethi, ngakolunye uhlangothi, kuvinjelwe ngokuphelele ezweni. Kuyafana nokuphila imisebenzi yokugembula kuyo yonke insimu yaseRussia. Inqubomgomo yezwe ayibonisi nganoma iyiphi indlela ukuthi kungase kube khona ushintsho kulezi zikhathi noma nini esikhathini esiseduze kusasa.
Njengamanje, ukugembula eRussia kuye kwaba yinkinga enkulu, njengoba ingavunyelwe, ukwenyuka okungalawuleki nokungahloliswanga kwaholela ekutheni kube nezinkinga ezinkulu zokugembula phakathi kwabantu bendawo ikakhulukazi kubantu abasha.
Kodwa-ke, kuleli lizwe, kukhona i-lottery federal, esemthethweni. I-lottery inikeza abadlali ithuba lokubheka nge-lottery egijima emiphakathini - iGosloto no-Sportloto. Ezinye izinguquko nazo zenziwa emakethe yokubheja ezemidlalo, nokuqaliswa kwamalayisensi akhethekile okudingekayo kwabasebenzi.
Ukugembula Nokulawulwa Kwezombusazwe eRussia
Umthetho Wokugembula eRussia Okwamanje, uHulumeni waseRussia wenza umthethonqubo omkhulu wombuso wonke amasevisi nemisebenzi ehlobene nokugembula. Kukhona i-federal executive agency enelungelo lokwenza imisebenzi ethile ukuze kuqaphe umthethonqubo ojwayelekile kanye nomthetho uma kuziwa enhlanganweni yokugembula.
Ngaphezu kwalokho, ezinye iziphathimandla eziphezulu ze-federal zinamakhono afana nokulawulwa nokuhlolwa kwemisebenzi enjalo. Izinhlangano eziningana zikahulumeni zezinhlangano ezikhona zezwe nazo zinamandla okwenza imisebenzi yokulawulwa kwendawo yokudlala kanye nomthethonqubo.
Ngokomthetho waseRussia, imisebenzi yokugembula ingahle ihlelwe yizinhlangano ezingokomthetho, ezibhaliswe ngokuvumelana nemithetho nezinqubo ezenziwa yiRussian Federation. Azikho izinhlangano ezingokomthetho, ezihlobene nezwe ngokwazo, izinhlangano zezwe noma iziphathimandla zendawo zinikezwa ithuba lokuhlela nokubamba izinsizakalo zokugembula kanye nokusebenza.
Kunezindawo ezine zokudlala ezakhiwe ngokuxhumana nemithetho ye-Russian Federation. Ngemuva kokuba uMongameli Putin avumile ekwandiseni inani lezindawo zokudlala ezikhethekile, kulindeleke ukuba kusethwe ngaphakathi kwe-Altay, eKaliningrad nasePrimorie, kanye nasemngceleni ophakathi kwesifunda saseKrasnodar nesifunda saseRostov.
UHulumeni kufanele abe negunya lokudala nokwehlisa indawo yokudlala, kanye nokuqinisekisa isikhangiso sokubeka amagama, izindawo zemingcele nezinye izici ngaphansi kwemigomo yesivumelwane nemibuso kahulumeni ezinhlanganweni ezimele.
Amagunya afanelekayo anamanje anelungelo lokukwazi ukwenza noma yiluphi uhlobo lwemisebenzi yokugembula ensimini yeRussia yiHulumeni kanye noMnyango Wezezimali we-Russian Federation.
I-Federal Tax Service yezwe inikezwa neminye yemithwalo yemfanelo yokubhalisa abasebenzisi bokubhuka, izitotela kanye namaphuzu okubheja. Kubuye kube nesibopho sokuhlola isimo sobuchwepheshe sokugembula. Eminye imithwalo yemfanelo ethile inikezwa nezinye iziphathimandla, uma kuziwa ekulawuleni, ukuqapha kanye nokulawulwa kwezikhono ezijwayelekile zokugcina.
Isenzo esikhulu sezomthetho esichaza izinto eziyisisekelo zokugembula eRussia futhi sinikeza izixazululo zokulawulwa kwezinsizakalo zokugembula kanye nemisebenzi kuleli zwe yi-Federal Federal of December 29th, 2006 No. 244-FZ.
Njengoba kushiwo ngenhla, uMthetho wezokuGembula ubiza zonke izinhlobo zokugembula ngokungemthetho, ngaphandle kwezinhlobo ezilawulwa ngaphansi kwemigomo nemibandela ethile ekwenzeni ikakhulukazi izindawo zokugembula.
Kukhona nokushaywa komthetho okungaphansi okuningana okunganikeza ukucaciswa okungcono kanye nezincazelo kuzimfuneko nezinqubo ezisetshenzisiwe kuMthetho Wezokugembula. Kodwa-ke, umthetho ohlobene nomthethonqubo weLotto uhlukile. Ama-lottries alawulwa yi-Federal Law "On Lottery" kaNovemba 11, 2003 no. 138-FZ.
Ukugembula oku-intanethi eRussia
Ukugembula kwe-Inthanethi eRussiaUkucubungula isimo somkhakha wokugembula eRussia, ukugembula kwe-intanethi kwakuhlobene nokukhathazeka okwandayo. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi ukugembula kwe-intanethi eRussia kubhekwa njengento yokusebenza engozini yomhlaba. Izinsizakalo zokugembula ezisekelwe kuwebhu okwamanje zivinjelwe ngokuqinile.
Ngaphezu kweyishumi edlule - ku-2006 - ukudlala imidlalo yengozi kwakwenqatshelwe ngokomthetho imithetho yezwe. I-Poker, noma kunjalo, isalokhu igcwele indawo ngenxa yezingxoxiswano ukuthi noma akunjalo yini ikhono noma umdlalo wesikhala.
Abadlali basekhaya basuke bakwazi ukufinyelela kumawebhusayithi abahlinzeki bamazwe angaphandle, kungakhathaliseki ukuthi i-ISPs iceliwe ukuba ivimbele amawebhusayithi ahlobene nokugembula.
0.1 Uhlu lwezindawo ze-10 eziphezulu ze-Casino ezisha ze-Russian Online
2.1 Umlando Wokugembula Umthetho eRussia
2.3 Ukugembula Nokulawulwa Kwezombusazwe eRussia
2.4 Ukugembula oku-intanethi eRussia